AppSheet: Manangana ary mametraha fampiharana finday fankatoavana atiny Miaraka amin'i Google Sheets | Martech Zone
AppSheet: Manangana ary mametraha fampiharana finday fankatoavana atiny miaraka amin'i Google Sheets
Talata, Martsa 16, 2021 Talata, Martsa 16, 2021 Douglas Karr
Raha mbola mivoatra tsindraindray aho dia sady tsy manana ny talenta no tsy tonga ny fotoana hahafahako ho lasa developer maharitra. Mankasitraka ny fahalalako aho - manampy ahy hamakivaky ny elanelana misy eo amin'ny loharanom-pahalalana sy ny orinasa manana olana isan'andro. Saingy… tsy te hianatra foana aho.
Misy antony roa mahatonga ny fandrosoana ny fahaizako amin'ny programa tsy paikady lehibe:
Amin'ity fotoana ity amin'ny asako - ny fahaizako ilaina any an-kafa.
Ny antony lehibe kokoa kosa dia satria tsy mino aho fa haharitra ny fangatahana fangatahana tsy mety voky ho an'ny mpamorona.
Fa maninona Satria ireo sehatra lehibe dia mampiasa vahaolana tsy misy kaody tsara dia tsara.
Tsy misy kaody, vahaolana tsy misy kaodika ary kaody ambany
Ny dingana manaraka ny teknolojia dizitaly dia mety hahafinaritra kokoa noho ny fandrosoana hitantsika tao anatin'ny fotoana fohy. Ny orinasa lehibe dia mamorona vahaolana drag and drop (tsy misy kaody na tsy misy code) izay tsara tokoa. Ny fotoana mety ho an'ireto rafitra ireto dia tsy misy fetrany satria ny mpitarika orinasa dia tsy mitaky orinasam-pampandrosoana hitondra ny vahaolana avy amin'ny sary napkin mankany amin'ny fampiharana feno.
Raha mampiasa ianao Google workspace ho an'ny fikambanananao (tena amporisihiko izy ireo), nandefa ny AppSheet izy ireo - mpanangana fampiharana tsy misy kaody! amin'ny AppSheet, afaka mamorona fampiharana namboarina haingana ianao mba hanampiana handrindra, hanamorana ary hanamorana ny asa. Tsy ilaina ny fanaovana kaody.
Izay rehetra ao amin'ny Google Workspace anao dia afaka mamorona sy mitantana ny fampiharana azy… izay mety hampitombo ny famokarana ataon'ny ekipanao, hampihena ny lesoka ary hampihena ny fihemoran'ny ekipan'ny fampandrosoana anao.
Fampiharana momba ny fankatoavana atiny AppSheet
Ity misy ohatra tsara, a fangatahana fankatoavana fitantanana izay mampiditra ny Google Sheets sy AppSheet hanosika mora foana ny atiny amin'ny alàlan'ny dingana fankatoavana tsikelikely.
Ity rindranasa manokana ity dia mifamatotra amin'ny Google Sheets fotsiny, fa afaka mampifangaro loharanom-baovao rehetra ilainao ianao.
Mipetraha amin'ny iTunes na Google Play
Ny ampahany tsara indrindra? Ny fampiharana izay nandanianao fotoana fotsiny hamoronana tsy misy kaody kaody dia tsy a fampiharana amin'ny tranonkala izay mandeha ao anaty tranokala, ny AppSheet dia mamela ny mpampiasa hamorona kinova fotsy amin'ny fampiharana azonao apetraka amin'ny Google Play na amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny iTunes.
Ny fametrahana dia mitaky fahazoan-dàlana AppSheet farafahakeliny izay mifototra amin'ny karama isaky ny mpampiasa na fandraisana andraikitra PRO.
Fampahafantarana: Mampiasa ny Google kaody eto.
Tags: paoma iostakelaka fisoratana anaranatsy misy codefampiharana fankatoavana atinyfampiharana googlegoogle appssheetorinasa googlegoogle playtoeram-piasana googlegsuiteiOSfampiharana iosiTunesfinday fampiharanano-fehezan-dalànampanamboatra fampiharana tsy misy kaody
Ny fifandraisana misy eo amin'ny Personas, ny dia an'ny mpividy, ary ny fantsom-pivarotana
JungleScout: Fitaovana sy fiofanana hanombohana ary hitombo ny varotrao amin'ny Amazon